कुन राशिका व्यक्तिलाई कुन पेशा उत्तम ? - Aarthiknews
कुन राशिका व्यक्तिलाई कुन पेशा उत्तम ?
राशिका व्यक्तिहरु उत्साहका साथ काम गर्न मन पराउँछन् । प्रायः मेष राशिका व्यक्तिहरुले आफ्नो कुराहरु सिधा तरिकाले प्रस्तुत गर्ने भएकोले उक्त बानीको कारण पछुत्ताउने गर्छन् । किनकी सबैलाई खुलेर कुरा गरेको मन नपर्न सक्छ । भोली भन्दापनि आज नै सोचेर मोज गर्नुपर्छ भन्ने स्वभाव यी व्याक्तीहरुमा हुन्छ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरु अलि जिद्धी स्वभावका हुन्छन् । तर कतिपय अवस्थामा शहनशिल क्षमता पनि प्रस्तुत गर्न सक्छन् । असल, इमान्दार, विश्वसनीय र राम्रो बानि भएकै कारण साथी बनाउनपनि यो राशिका व्यक्तिहरु लागिपर्छन् । कुनै नयाँ चीजमा ढल्किन यो राशिका व्यक्तिहरुलाई अफ्ट्यारो हुन्छ । किनकी यो राशिका व्यक्तिहरु परिवर्तनमा हतपत्त विश्वास गर्दैनन् । यो राशिका व्यक्तिहरुलाई कृषि, बैंकिङ, चिकित्सा शिक्षा र निर्माण क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ ।